soldering waya kune zvinongedzo | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
soldering waya kutaurirana
Induction Soldering Wire yeCo-axial neHigh Frequency Heating Units
Chinangwa To solder centre-conductor uye inodzivirira kurukwa kwematare egungano kusvika mazana mashanu (500) ° F (° C).
Zvinyorwa • Makambani anopa magungano
• Kupisa kunoratidza pende
Kupisa 500 (250) ° F (° C)
Zvishandiso DW-UHF-4.5kW kupisa induction sisitimu, yakashongedzwa neiri kure kupisa chiteshi ine maviri 0.33 μF ma capacitor. Iyo induction yekupisa coil yakagadzirirwa uye kugadzirirwa zvakanangana neichi chishandiso.
Maitiro A multi-turn helical coil anoshandiswa uye tembiricha-inoratidza pendi inoiswa kunzvimbo yekubatana. Iyo tambo yegungano inoiswa pamusoro peiyo induction yekupisa coil, uye RF simba rinoiswa. Iyo nguva-kune-tembiricha uye iyo yekudziya maitiro pane iyo chikamu inosimbiswa. Iyo inotevera waya gungano inoiswa pane iyo coil, gungano rinopisa uye solder waya inodyiswa mukati memubatanidzwa. Sangano rinopisa zvakanaka uye rinosvika 500 ° F mumasekondi gumi.
Migumisiro / Kubatsirwa • kubviswa kwegadziriswa
• kuwirirana kwakavimbika kunoitwa
• kukurumidza kushanda nguva
Categories Technologies Tags High frequency soldering wire, RF soldering wire, soldering wire, soldering waya kutara, soldering waya kutaurirana, soldering wire kushanda, soldering waya kutengesa